Pokémon TCG Online 2.59.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.59.0 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
* အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်တက်ဘလက် DEVICE ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဖုန်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်။ *
ကမ္ဘာတဝှမ်း PLAY, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခက်အခဲအခြားကစားသမား!
ပျော်စရာသင်ယူမှုဖူးနှင့်ပိုကီမွန်ထရေးဒင်းကတ်ဂိမ်းအွန်လိုင်းကျွမ်းကျင်! ကွန်ပျူတာဆန့်ကျင်လေ့အကျင့်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူဦးခေါင်းမှဦးခေါင်းကိုသွားပါ။ သင်သည်သင်၏စုဆောင်းမှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ထူးခြားသောကုန်းပတ်အောင် play အဖြစ်ကတ်များနှင့်ကုန်းပတ် Unlock ။ သင့်ရဲ့ကုန်းပတ်နှင့်ကဒ်စုဆောင်းခြင်းသင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူတက်ဘလက်နဲ့ Desktop အကြားပြောင်းလဲခွင့်ပြု, သင့်ပိုကီမွန်သင်တန်းပေးကလပ်အကောင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။
, မြက်, မီးဘေး, ဒါမှမဟုတ်ရေကုန်းပတ်ကနေရှေးခယျြပါညာဘက်ဂိမ်းတစ်ခုထဲသို့ခြေလှမ်း, သင်ထားတဲ့လွယ်ကူသောကစားအတွေ့အကြုံကိုအတွက် go အဖြစ်သင်ယူ: START ရန်လွယ်ကူ။
သင်၏စုဆောင်းမှုကိုချဲ့ထွင်: ကတ်များ, ပွင့်လင်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ထုပ်များ, အခြားကစားသမားများနှင့်အတူကုန်သွယ်ရယူနိုင်သော, သင်၏အကြိုက်ဆုံးကတ်များန်းကျင်စုံလင်ကုန်းပတ်ကိုတည်ဆောက်စေ။ သင်၏စုဆောင်းမှုသင်နှင့်အတူကြီးထွားလာ!
သင့်အတွေ့အကြုံ customize: သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်းပတ် Build သင်၏ကဒ်ကြည့်, ကုန်းပတ်သေတ္တာများနှင့်ကိုယ်ပွား customize, နှင့်အွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများ join ။
သင့်ကျွမ်းကျင်မှု HONE: သင်ကတခြားကစားသမားစိန်ခေါ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသည်အထိကွန်ပျူတာဆန့်ကျင် Play ။
သင်သည်သင်၏ကုန်းပတ်ဒီဇိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုခံစားရသည့်အခါအခြားကစားသမားစိန်ခေါ်သို့မဟုတ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာပြသနေတဲ့ပြိုင်ပွဲ join: ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်။
** တစ်ဦးကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ **
* Español (က de Espana)
* Português (Brasil ပြုပါ)
© 2018 ပိုကီမွန်။ © 1995-2018 ကို Nintendo / သတ်တဝါ Inc./GAME မထင်မှတ်သော Inc ။ TM, ®နှင့်ဇာတ်ကောင်အမည်များကို Nintendo ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
Pokémon TCG Online အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pokémon TCG Online အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pokémon TCG Online အား အခ်က္ျပပါ
raryon စတိုး 10 3.66k
APK ဗားရွင္း 2.59.0
File Size: 592.92MB
Release date: 2018-12-13 19:18:56